Sina N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA,) CAS NO. 103-83-3 ， Orinasa BDMA sy mpanamboatra | Kerui Chemicals
Anaran'ny varotra: BDMA
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) ao amin'ny indostrian'ny polyurethane, izy io dia mpiorina amin'ny polyester polyurethane block polyester, foam polyurethane henjana, ravina polyurethane ary fonosana adhesive.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) no tena ampiasaina amin'ny volon-koditra henjana, izay mety hahatonga ny vovo-polyurethane hanana fluide aloha sy sela fanamiana ary firaiketam-po tsara eo amin'ny vatana sy ny substrate.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) eo amin'ny sehatry ny syntetika biolojika, dia ampiasaina matetika ho toy ny catalstères, inhibitors corrosion, acid neutralizers, ary ny accelerators amin'ny fampidirana slice microscopy elektronika amin'ny zava-mahadomelina biolojika ho an'ny syntheteran'ny dehydrohalogen.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) dia ampiasaina ihany koa hanamboarana ny sira amonium quaternary, hamokarana fungicides miasa mahery sy mahery, sns.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) amin'ny resin epoxy dia ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny rafitra fanasitranana toy ny asidra anhydrides, polyamides ary amine fatty hanafainganana ny fanasitranana vokatra. Izy io dia be mpampiasa amin'ny epoxy resin elektronika potting fitaovana, encapsulate fitaovana, epoxy fonosana, ary loko an-dranomasina.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) ohatra manokana momba ny fampiharana dia misy: laminate mitambatra resin-epoxy misy resin-karbaona / monomolecular, fonosana elektroforetika ho an'ny substrat epoxy, ary lakaoly potiota miovaova ho an'ny karazana transformator.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) dia feno 180 kg / amponga, voatahiry ao anaty toerana mangatsiatsiaka sy misy rivotra ao anaty trano, voaro amin'ny hamandoana sy ny filentehan'ny masoandro ary 12 volana ny fotoana fitahirizana azy.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) dia fitaovana mpanelanelana amin'ny syntetika. Aza fady amin'ny masonao sy ny hoditrao mandritra ny fampiasana. Raha misy ny fifandraisana dia miasà rano be dia be ary alefaso any amin'ny dokotera mba hotsaboina.